Gobolka Banaadir oo heshiis la galay shirkadaha gaarka loo leeyahay+SAWIRRO | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Gobolka Banaadir oo heshiis la galay shirkadaha gaarka loo leeyahay+SAWIRRO
Gobolka Banaadir oo heshiis la galay shirkadaha gaarka loo leeyahay+SAWIRRO
Hishiiskaan ay kala saxiixdeen maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeega dad-weynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale oo waara loogu abuuri lahaa barakacayaasha iyo danka dantarta ah ee ku nool caasimada.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Jakeeti ayaa u saxiixday maamulka gobolka Banaadiir halka madaxa mashuuraca geel uu saxiixay Maxamed Nuur Cabdulle dhinaca shirkadaha gaarka.
Dr Hodan Cali agaasimaha xafiiska xalka waara ee gobolka Banaadir iyo Maxamed Sadiiq Sheikh maamulka shirkada korontada Beco ayaa guul ku tilmaamay in markaan loo soo jeesto shaqo abuurka dhalinyarada kuwooda danyarta waxaana maamulka shirkada Beco ay balan qaadeen in fursado shaqo ay siinayaan 150 dhalinyaro ah.
“Waxaan shaqo siineynaa 150 dhalinyaro ah inagoo imtixaan ka qaadeyno waxaan kaloo sameyneynaa kuwa ku dhaca imtixaanka inaan bareyno xirfad ay ku shaqeystaan ayuu yiri Maxamed Sadiiq Sheekh oo madax ka ah shirkada korontada Beco.
Madaxa mashruuca geel Maxamed Nuur Cabdulle ayaa sheegay in mashruucaan la gaarsiin doono dhowr kun hase ahaatee lagu bilaabayo 200 oo dhalinyaro taasi oo ah bilaaw waxaana sidoo kale ka mid ah in qaarkood la barayo xirfado kala duwan si ay nolosha ugu maareeyaan.
“Waxaan ku bilaabeynaa 200 oo dhalinyaro mashruucaan shaqo abuurka waxaana qorshahu yahay in sanadaha soo socdo aan gaarsiino dhowr kun hase ahaatee dhalinyarada waxaa looga baahanyahay inay da daal xooggan muujiyaan ayuu hadalkiisa ku daray Maxamed Nuur madaxa mashruuca Geel.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Jakeeti ayaa sheegtay in maamulka gobolka uu soo dhaweynayo wax wabo oo lagu hormarinayo dhalinyarada caasimaad siiba kuwa danta yar.
“Maamulka gobolka banaadir waa ka go’antahay harmarinta dhalinyarada iyo fududeynta mashaariic walbo oo lagu hormarinayo dhalinyarada caasimada ayay tiri guddoomiye basmo Caamir .
Previous articleRa’iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Khaliif Galleyr oo geeriyooday.
Next articleMadaxda Qaranka oo ka tacsiyeysay geerida Cali Khaliif Galayr.